Amboniloha : Trano lehibe nirehitra, zaza iray maty, may kila
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2018 → décembre → 29 → Amboniloha : Trano lehibe nirehitra, zaza iray maty, may kila
Hain-trano mahatsiravina no nitranga omaly antoandro tetsy Alarobia Amboniloha. Trano lehibe iray misy rihana roa no kila hotohoton’ny afo. Aina tsy manan-tsiny iray ary fananana nohariana tam-polon-taonany maro no nafoy tao anatin’ny adim-pamantaranandro vitsy monja.
Amin’ny 12 ora sy sasany antoandro. Manao tanik’orana ny andro ary mingaingaina izay tsy izy. Tamin’izay indrindra no nisahotaka iny faritra Amboniloha iray manontolo iny. Setroka mainty no tazan’ny rehetra nitambolona niakatra, nanamaloka tampoka ny andro. Misy trano may any ho any ! Teo ambany kelin’ny fokontany eto, trano biriky lehibe iray no nataon’ny afo kilalao. Efa afo niredareda tanteraka teo amin’ny rihana farany ambony no hitan’ny rehetra. Nanampy trotraka ny toetr’andro ka vetivety dia nahazo tao amin’ny rihana manaraka izany ary niafara tany amin’ny farany ambany. Tao anatin’ny ora vitsy monja dia tsy misy afa-tsy vato sy biriky maintin’ny setroka sisa navelan’ny afo mpandrava. Tetsy ankilan’izay, renim-pianakaviana iray, safotry ny tomany, nilaza fa mbola tavela tao ny zanany lahikely vao 11 taona monja.
Araka ny angom-baovao teny an-toerana dia fianakaviana samihafa no mipetraka amin’ity trano lehibe ity. Tany amin’ny rihana ambony indrindra, izay niaingan’ny loza dia tsy nisy afa-tsy ankizy mpirahalahy no nilalao tany. Mbola niasa ireo ray aman-dreniny. Voalaza teo fa nilalao afo izy ireo tao an-trano. Sendra zavatra mora nirehitra anefa ka dia nidedaka ny tao an-trano. Ilay ankizilahy iray tafatsoaka tany ivelany raha vao nanomboka nirehitra ny tao an-trano. Ilay rahalahiny kosa tavela. Araka ny filazan’ny mponina mahafantatra ireo fianakaviana ireo mantsy dia toa hoe manana fahasembanana ity tsy manan-tsiny namoy ny ainy ity. Hany ka tsy nahafantatra akory ny loza miha-manatona azy. Nisy ihany ireo niezaka handeha hanavotra, hoy ny feo nandeha, saingy efa tara loatra, efa voafandriky ny afo tanteraka ity zaza ity.
Tokony ho fotoana fohy taorian’ny nitrangan’ny loza no tonga teny an-toerana ny fiaraben’ny mpamonjy voina iray, narahana roa hafa taty aoriana ary fiara kely roa. Somary nanahirana tany am-boalohany ny fahaterenan’ny lalana, andaniny. Fa isan’ny nampimenomena ny olona ihany koa ny faharatsian’ireo fitaovana nampiasain’ireo mpamonjy voina, izay hita fa efa tena antitra tokoa. Na izany na tsy izany aza anefa, noho ny fikelezan’ireto miaramilan’ny afo aina, nampian’ireo fokonolona dia voasakana tsy hitatatra tamin’ireo trano manodidina ny fahavoazana, eny fa na dia efa nisy voalelaky ny afo ihany aza ny trano roa teo akaikin’ity nirehetra ity. Ora telo taty aoriana vao maty tanteraka ny afo, ary tamin’izay fotoana izay ihany koa no hita ny vatana mangatsiakan’ilay zaza.